1. व्यक्तिगत जानकारी को परिभाषा
वेबसाइट र संसाधनहरु तपाइँ पहुँच को लागी तपाइँको भ्रमण को बारे मा विस्तृत जानकारी। कुकी आईपी ठेगाना, अपरेटि system सिस्टम, र ब्राउजर को उपयोग गरी जानकारी को एक दायरा, सs्कलन गर्दछ।
भ्रमण गरिएका वेबपृष्ठहरुको आधारमा, केहि पानाहरुमा फारमहरु हुन सक्छन् जुन तपाइँको बारेमा जानकारी स collect्कलन गर्दछ, जस्तै तपाइँको नाम, हुलाक कोड नम्बर, एक ईमेल ठेगाना, आदि।
2. हाम्रो कुकी नीति
कुकीहरु तपाइँको वेबसाइट को अनुभव साइट को साथ तपाइँको विगत को अन्तरक्रिया को आधार मा अनुकूलन गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ। कुकी डाउनलोड र इन्टरनेट ब्राउजर द्वारा सुरक्षित गरीएको छ जब एक वेबसाइट पहिलो पटक को लागी उपयोग गरीन्छ। सुरक्षित कुकी वेबसाइट भ्रमण बढाउन को लागी अर्को भ्रमण मा प्रयोग गरीन्छ।
कुकी अवरुद्ध वा त्यस्ता अवस्थामा मेटाउन सकिन्छ जहाँ तपाइँ एक कुकी संग सहमत हुनुहुन्न। जे होस्, त्यसो गरेर, वेबसाइट लोड हुन सक्दैन, वा वेबसाइट को केहि प्रकार्यहरु कुकी को अवरुद्ध को कारण, सही ढंगले काम गर्न सक्दैन।
नोट: वर्तमान मा, हाम्रो वेबसाइट मा प्रयोग कुकीहरु को कुनै पनी जानकारी स that्कलन कि व्यक्तिगत रूप मा तपाइँलाई पहिचान गर्न को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ।
कसरी व्यवस्थापन र कुकीहरु मेटाउने
कुकीहरु ब्लक वा ब्राउजर "सेटअप" (वा "उपकरण") सेटिंग्स को माध्यम बाट मेट्न सकिन्छ। एउटा विकल्प या त सबै कुकीहरु स्वीकार वा अस्वीकार गर्न को लागी हो। दोस्रो विकल्प विशिष्ट वेबसाइटहरु बाट विशिष्ट कुकीहरु लाई स्वीकार गर्न को लागी हो। ब्राउजर लाई समायोजित गर्न को लागी सेट गर्न सकिन्छ ताकि यो तपाइँलाई सूचित गर्न सक्दछ जब तपाइँ एक कुकी प्राप्त गर्नुहुन्छ। कुकीज को व्यवस्थापन र उनीहरुलाई मेटाउने विधि विशिष्ट ब्राउजर संग फरक हुन्छ। सबै ब्राउजरहरु यस बिन्दुमा भिन्न हुन्छन्। कसरी तपाइँको ब्राउजर कुकीज प्रबन्ध गर्दछ जाँच गर्न को लागी, कृपया तपाइँको ब्राउजर मा मद्दत समारोह को उपयोग गर्नुहोस्।